စင်စင်နာတီငရုတ်သီး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
velveeta mac နှင့်ကြက်သားနှင့်အတူဒိန်ခဲ
သင်, ဝါရင့် beefy ဖူးဘူးဆိုရင် စင်စင်နာတီငရုတ်သီး , ထို့နောက်သင်တစ်အရသာအားရစရာဘို့အတွက်ပါပဲ။ သင်တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှငရုတ်သီးနှင့်မတူဘဲဤပန်းကန်တွင်ထူးခြားသောအမွှေးအကြိုင်များထည့်ထားသော meaty sauce များရှိသည်။ ဒါဟာအားလုံးထူထပ်အရသာနှင့် spaghetti တစ်အိပ်ရာပေါ်မြင့်မားစွာပုံသည်အထိတပြိုင်နက်တည်းပါပဲ။
၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ချက် ၁၂၀၀ အစားအစာအစီအစဉ်
မတူတာက ပုံမှန်ငရုတ်သီးစာရွက် Cincinnati Chili ကိုကိုကိုးအမှုန့်၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်မွှေးသောနံ့သာများပါသောမမျှော်လင့်သောရာသီများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်း၏ဇာစ်မြစ်၏မြို့အမည်, စင်စင်နာတီ , ဒီငရုတ်သီးသည်ပုံမှန်ငရုတ်သီးနှင့်တူသောပန်းကန်လုံးတွင်မဟုတ်ဘဲ၊ တကယ်တော့၎င်းသည်ကျော်ကြားသောဒေသဆိုင်ရာအထူးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Smithsonian သည်ယင်းကို“ အမေရိကရှိအထင်ကရအစားအစာ ၂၀” တွင်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းပန်းကန်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
သင် spaghetti ငံပြာရည်များအတွက် marinara ငံပြာရည်ကိုသုံးနိုင်သည်
စင်စင်နာတီငရုတ်သီးကို ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တီထွင်ခဲ့ပြီးအချို့ကမူမူဆာကာသို့မဟုတ်ဂရိကဲ့သို့အသားဟင်းလျာများအရသာမျိုးစုံရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းကို Skyline Diner ကွင်းဆက်မှဖြန့်ချိပြီးလူသိများလာခဲ့ပြီးယင်း၏ menu များတွင်အဓိကကျသည်။ “ Skyline Chili” သံမဏိပြားကိုမှာစရာမလိုဘဲထိုစားသောက်ခန်းမများသို့တစ်ခေါက်သွားစရာမလိုတော့ပါ။
ဒီ yummy စာရွက်ကိုပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူပေမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ, အများစုမှာကွာ simmering သုံးစွဲနေသည်။ ဒီစာရွက်အတွက်ထူးခြားတဲ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ကြက်သွန်နီကိုမွှေးပေးပါ။ ထည့်ပါ uncooked အမဲသားနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ တူညီသောအိုးကို (အမဲသားပထမ ဦး ဆုံးအညိုရောင်မဟုတ်ပါဘူး) ။
လိုအပ်သောအနေဖြင့်ထိပ် မှနေ၍ အဆီများကို2နာရီကြာမျှ skimming မျှဝေပါ။
spaghetti စင်စင်နာတီစတိုင် (အနိမ့်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်အင်ဖို) ကျော်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ရှေ့ဆက်သွားပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရနံ့သာမျိုးကိုပြောင်းပါ။ ဇီသီးသည်အခြားဟင်းလျာတစ်မျိုးကိုထပ်ထည့်သည်။ သင်လိုအပ်လျှင် Tabasco သို့မဟုတ် Worcestershire ဝက်အူချောင်းများသည် zing အနည်းငယ်ထပ်မံထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
စင်စင်နာတီပုံစံငရုတ်သီးတွင်ရိုးရာအစင်းများမှာကျောက်စိမ်းသို့မဟုတ်ငရုတ်သီးများ၊ ဖျက်စီးထားသော cheddar နှင့်ကုန်တယ်ကြက်သွန်နီများဖြစ်သည်။ ဒီပန်းကန်ကိုစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်, ထိပ်တန်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ပုံနှင့် spaghetti တစ်ခက်ရင်းခွနှင့်အတူခုတ်ဖြတ် (သင်လိုပဲလိုလှည့်အစား အီတလီ spaghetti နှင့် meatballs ပန်းကန် ) ။
'လမ်း' စနစ်အတွက်, spaghetti ၏အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူအစဉ်အမြဲ။
လေးလမ်းကြက်သွန် ငရုတ်သီး, ကုန်တယ်ကြက်သွန်နီနှင့်ဖျက်စီးဒိန်ခဲနှင့်အတူပဲရှိတယ်။
လေးလမ်းသွား: ငရုတ်သီး, ပဲနှင့်ဖျက်စီးဒိန်ခဲထိပ်ဆုံး။
၅ လမ်း - အကျင့် ငရုတ်သီး၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊
အပူပေးရန် ပူဖောင်းမထိမချင်းမီးဖိုပေါ်ကအိုးထဲဒါမှမဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့မီးဖိုထဲထည့်ပြီးအပူပေးလိုက်ပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။
သင်တစ် ဦး ပျားရည်ကိုဖုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက်အေးခဲနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြာ
အကောင်းဆုံးငရုတ်သီး - အရသာနှင့်အတူတင်ဆောင်!
Texas Chili - လူအစုအဝေးအဘို့ကြီးသော
အစိမ်းရောင်ငရုတ်သီး - ရေခဲသေတ္တာ - ဖော်ရွေစာရွက်!
သက်သတ်လွတ်ငရုတ်သီး - အမြန်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူပါသည်။
Easy White ကြက်သားငရုတ်သီး - လွယ်ကူသောတပတ်တာညစာစား
White တူရကီငရုတ်သီး - crockpot စာရွက်
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်နှစ် နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ် နာရီ ၃၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ရှုပ်ထွေးသောအရသာများဖြင့်ပြည့်နှက်။ လွယ်ကူသောအရသာရှိသောပန်းကန်သည်သင့်မိသားစုကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေပြီးပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ကြက်သွန်နီ ထုကုန်တယ်
▢1 ½ အလေးချိန်ပေါင် ပိန်မြေပြင်အမဲသား
▢၄ ခွက် ရေ
▢ဆယ့်ငါး အောင်စ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်
▢1 ½ ဇွန်း ရှလကာရည်
▢၄ လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ minced
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မချိုသောကိုကိုးအမှုန့်
▢၁ ဇွန်း ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ
▢၃ ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း oregano
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မြေပြင်သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မြေမွှေးကြိုင်
ဆူအောင်ဆူအောင်လုပ်ပါ။ အပူကိုလျှော့ချပြီး ၂ နာရီသို့မဟုတ်ထူထဲသည်အထိမျှတည်ထားပါ။
ပင်လယ်အော်အရွက် Remove နှင့်စွန့်ပစ်။ ပူ spaghetti ကျော်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
သော့ချက်စာလုံးစင်စင်နာတီငရုတ်သီး သင်တန်းအဓိကသင်တန်း၊ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။